Edere site Tranquillus | Mar 21, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Iji ndetu bullet nwere ike ịdị mkpa iji melite ọgụgụ nke ederede ma mee ka ọ dị mfe nghọta. N'ihi ya, a na-ejikarị ya eme ihe mgbe paragraf dị mgbagwoju anya ma ọ bụ karịa ogologo. Nke a bụ otu o si enye gị ohere ị depụta ọnọdụ, depụta ihe atụ, wdg. Mgbe ahụ nsogbu nke iji ya eme ihe. Edere ederede na iwu niile ekwesiri iburu n'uche iji tinye ya nke ọma ka a mara.
Gịnị bụ mgbawa?
Otu mgbọ bụ akara na-eme ka ị mara na ị na-esi n’otu mmewere ma ọ bụ otu ihe agafee na nke ọzọ. Anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti mgbọ agụgụ na ndị ọzọ anaghị agụ. A na-akpọkwa nke ndị mbụ na-agba ume na bọmbụ nke abụọ anaghị achịkwa.
N’ime usoro edetu, akụkụ nke ọ bụla na-amalite site na mgbọ. Ogologo oge gara aga, mgbawa belatara ka ọ gbarie, mana taa ọtụtụ imewe dị n'aka gị, ụfọdụ nwere anya udo karịa ndị ọzọ. N'ime listi onu ogugu enwere onu ogugu, onu ogugu ma obu akwukwo ozi agha gha ebu uzo agha bu ihe a na-ekwu.
Ọtụtụ mgbe, a na-eji ndepụta mpụta ọnụ iji mesie usoro nke ịgụta ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndepụta nwere ọnụ ọgụgụ edepụtara ọnọdụ ndị a ga-ezute iji nweta folda, ịnweghị ike ịmalite na ọnọdụ ọ bụla. N'aka nke ọzọ, mgbe anaghị enye iwu ndepụta ahụ, a na-eche na ihe niile dị na-agbanwe agbanwe. Mgbe ụfọdụ a na-eji ihe dịka usoro mkpụrụedemede edepụta.
A mgbo ndepụta a na-agbaso echiche mgbagha. Ya mere, ọ ga-abụ ihe obi ụtọ ịhụ na karịa ihe niile na-agbanwe agbanwe. Nke a bụ eziokwu ọbụlagodi ndepụta aha mgbochighi. Nkwenye na-emetụta ihe dị iche iche dịka iji otu ụdị mgbọ ahụ na nyocha, iji otu akara edemede na ịhọrọ nkwupụta nke otu okike. N'ezie, ịnweghị ike iji oge mee ihe ụfọdụ na kọma maka ndị ọzọ. Ọ dịkwa mkpa ịkpọsa ndepụta ahụ site na nkebi ahịrịokwu nke ọkwa na-akwụsị.
GỤỌ Akuko: 4 Isi ihe di oke mkpa iji mara nke oma
Ọ bụ mgbe niile n'echiche a nke mmekọrịta ọnụ na-enweghị ike iji ahịrịokwu nke ụdị dị iche ma ọ bụ nke oge dị iche. Also nwekwara ike mix aha na ngwaa na infinitive. Otu aghugho ga- abu ka imee ngwaa nke ihe n’aru mmebi iwu nke ala.
Ihe edere ziri ezi
Have nwere nhọrọ dị n'etiti ọtụtụ akara edemede. Naanị, ị ga-ahụrịrị na agbanwe agbanwe. Nke a bụ otu ọ ga - esi dị mkpa iji mkpụrụedemede isi maka ọnụọgụ ọ bụla ma ọ bụrụ na itinye oge maka mmewere ọ bụla. Ọ bụrụ na ịhọrọ akara rikoma ma ọ bụ semicolon, ị ga-eji obere mkpụrụedemede mgbe ọ bụla bullet ma tinye oge na njedebe. Yabụ ịmalite ahịrịokwu ọhụrụ na mkpụrụedemede iji gaa na paragraf ahụ ma ọ bụ bido akụkụ ọhụrụ.
Na nkenke, ọ bụrụ na ndepụta edetu na-eme ka onye na-agụ ya nwee ntụnye aka n'ogologo ederede, ọ ga-abụ ihe na-ekwekọghị ekwekọghị asọpụrụ iwu ụfọdụ nke na-enweghị ike ịgụ ya ga-emebi.
Mbara ndepụta na readability Machị 24th, 2021Tranquillus
gara agaUsoro ide ihe na usoro ọgụgụ
-esonụIsmchụpụ na ọnọdụ obi ọjọọ: onye ọrụ gị ọ ga-azọrọ emebi ọ bụrụgodi na ezighi ezi kpatara ya?